ယောက်ျားလေးများနှင့်ကစားစရာများ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ငါဘယ်လောက်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ Internet Explorer 7, FIrefox2နှင့် MacBook Pro အားလုံးသည်တစ်ပတ်တည်းတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ RSS feeds များကိုပို့စ်ရာနှင့်ချီ။ နောက်ကျ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် ၂၀၀ ကိုအီးမေးလ် ၂၀၀ ခန့်ကျန်ရှိနေသည်။ ငါအရင်ကထက်အလုပ်ပိုလုပ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။
ပထမ ဦး ဆုံး… Internet Explorer ၇။ အခြားရွေးချယ်စရာမီနူးနေရာများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျသည်။ သင်မစမ်းဖူးသေးဘူးဆိုရင်၊ နှင့်အညီ, သင်တန်း, tabbing ကြီးလှ၏။
ဒုတိယ ... Firefox ၂ ။ တကယ်ပဲ zippy! ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ငါစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသေးပေမယ့်ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်ကိုငါကြား၏။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Google Toolbar ကိုစွန့်ပစ်နိုင်သည်။
တတိယ…ကျေးဇူးပြုပြီး… drumroll … MacBook Pro ။ ငါဒီခွေးကလေးပေါ်ကအလုပ်တွေကိုရလိုက်ပြီး 'အေးမြတဲ့အချက်' မှာတော်တော်လွင့်သွားတယ်။ ငါ ၀ ယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေတဲ့လက်တော့အိတ်အသစ်တစ်ခုကိုငါဝယ်ခဲ့ရတယ်။ ငါနေဆဲအလုပ်မှာနဂါးမော်နီတာအပေါ်စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ ... ဒါပေမယ့်တစ်ပါတ်ထက်လျော့နည်း၌ငါနီးပါးအပြည့်အဝပြောင်းလဲငါ။
ငါက Parallels (WOW!) ကို load လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါက screen တစ်ခု (ဒါမှမဟုတ် window တစ်ခုမှာ) နဲ့အခြား OSX မှာရှိရင် XP ကို ​​run လို့ရတယ်။ ဒါကငါ့ကိုဝေးမှုတ်။ ငါက Windows Cripple ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူး အသွင်အပြင်၊ ခံစားမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သင့်အားပြောပြရမည်မှာ OSX သည်ကြည့်ခြင်း၊ ငါကအက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်ပေမယ့်ငါဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ငါနယ်စပ်မှာဖွင့်လှစ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါတရားဝင်တ ဦး တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
Mac အကြောင်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာအချို့လား။ သံလိုက်ကြိုးကြိုးသည်အေး။ အေးသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်မှာမူစုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးသော power supply ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့က extension ကြိုးကိုအားဖြည့်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်အနည်းငယ်သာခြေအဘို့ဒီဇိုင်းအများကြီး။
25:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 53
ပထမ ဦး ဆုံးကြောင်များနှင့်ခွေးများအတူတကွနေထိုင်နေကြပြီးယခု MAC တွင် Doug လုပ်နေသည်လား?! ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး!
ရယ်စရာကောင်းတာကမနေ့ကဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင် (MAC boy) နဲ့အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာ (PC boy) ဟာတကယ်ကိုဘဝနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အနုပညာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကုဒ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ ၀ တ်ဆင်စရာမလိုပါ။ စည်းမျဉ်းအသစ်များ၏ပထမနေ့တွင် MAC ကောင်လေးသည်အညစ်အကြေးကင်းမဲ့စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် PC ကောင်လေးသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုလည်စည်းဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Apple ကြော်ငြာဖြစ်လာသည်။
အကယ်၍ မှတ်ဉာဏ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒီတော့ဒီမေးခွန်းကမေးစရာအရေးကြီးတယ်၊ အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရလား၊